Aha njirimara: 15033055276@139.com
ọkwa 4.8 / 8.8 black oxidation hex bolts
ọkwa 4.8 / 8.8 zinc plated hex bolts
hexagon anya bolts
ọkwa 4.8 / 8.8 ojii ọxịdashọn hex akụ
ọkwa 4.8 / 8.8 zinc plated hex nuts
abụọ ọgwụgwụ stud bolts
zuru ezu eri
onwe mkpọpu ala kposara
dobe na arịlịka
hex isi uwe arịlịka bolts
4PCS ọta arịlịka
3PCS ọta ọta
antiskid shark fin arịlịka
mbuli arịlịka arịlịka bolts
otu mgbasa arịlịka
Full Eriri Mkpara
Akọrọ nke kporo
Ihe eji egwupu onwe ya
A na-eji kposara na-agbapu onwe ya nke ígwè ígwè ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara. Ekewara site na eriri nke eri, e nwere abụọ dị iche iche nke onwe drillingl ịghasa eri: ezi eri na keadighi rarii eri.
A osisi ịghasa bụ a ịghasa mee nke a isi, shank na threaded ahu. Ebe ọ bụ na agbanyeghị ihe niile, ọ na-akpọkarị kposara ndị a (PT). Isi. Isi nke ịghasa bụ akụkụ nke nwere draịva ma ewere ya dị ka elu nke nkedo. Ọtụtụ osisi kposara bụ Flat isi.
Ihe nkedo Chipboard bu ihe nkedo onwe ya na obere uzo. Enwere ike iji ya maka nkenke ngwa ngwa dị ka ijiri osisi ndị dị iche iche. Ha nwere eriri siri ike iji hụ na ịnọ ọdụ zuru oke nke nkedo n'elu ala. Imirikiti klọb chipboard na-eji aka ya akụ, nke pụtara na ọ dịghị mkpa maka oghere ọkwọ ụgbọ mmiri ga-ebu ụzọ gbaa. Ọ dị na igwe anaghị agba nchara, carbon steel, na alloy steel na-ebuwanye akwa na akwa mgbe ọ na-emekwa ka ọ na-eguzogide ọgwụ.
A na-eji klọọkụ nkụ nke carbon carbon ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara mee ihe maka ịkwado mgbidi na nkụ osisi ma ọ bụ nke ọla. Ha nwere eri miri emi karịa ụdị kposara ndị ọzọ, nke nwere ike igbochi ha iwepu ngwa ngwa na drywall.
Mpempe akwụkwọ osisi wedge bụ arịlịka arịlịka nke mejupụtara nke nwere akụkụ anọ: ahụ arịlịka eri, usoro mgbasa, mkpokọta, na onye na-ehicha efere. Arịlịka ndị a na-enye ụkpụrụ kachasị dị elu na nke na-agbanwe agbanwe nke arịlịka ụdị mgbasawanye ọ bụla
Ihe nkedo-na arịlịka bụ arịlịka ụmụ nwanyị nke etinyere maka ijigide ihe, a na-ejikarị ha eme ihe maka ngwa ngwa n'ihi na nkwụnye arịlịka dị n'ime na-agbasawanye n'akụkụ anọ iji jide arịlịka ahụ n'ime oghere tupu ịtinye mkpanaka ma ọ bụ eriri. Ọ mejupụtara abụọ akụkụ: expander plọg na arịlịka ahụ.
Otu mgbanaka kewara n'otu ebe wee hulata n'ụdị helical. Nke a na - eme ka onye na - ehicha ahụ nwee ike mmiri n’etiti isi ihe na ngwa ahụ, nke na - ejigide ihe nchacha ahụ na mkpụrụ ya na eriri siri ike megide mkpụrụ ma ọ bụ eriri mkpụrụ, na - eme ka esemokwu na iguzogide ntụgharị. Kpụrụ ndị dị mma bụ ASME B18.21.1, DIN 127 B, na United States Military Standard NASM 35338 (nke bụbu MS 35338 na AN-935).
Ewepụghị washers na-eji dịkwuo amị elu nke aku ma ọ bụ fastener isi si otú ahụ na-agbasa clamping ike n'elu a ibu ebe. Ha nwere ike ịba uru mgbe ị na-arụ ọrụ na ihe dị nro na oghere buru ibu ma ọ bụ buru ibu.
A na-ejikarị eriri eri zuru ezu, dị ngwa ngwa dị ngwa nke a na-eji n'ọtụtụ ngwa ngwa. A na-agbanye mkpara site na otu nsọtụ gaa na nke ọzọ ma na-akpọkarị mkpara zuru oke, akara mkpanaka, mkpanaka TFL (readgha Ogologo Ogologo), ATR (Mkpịsị ụkwụ niile) na ọtụtụ aha ndị ọzọ na acronyms.
Ugboro abụọ End Stud bolts
Ugboro abụọ ejiri mee mkpọchi bụ eriri ejiri eriri nwere isi na nsọtụ abụọ ya na akụkụ agụghị akwụkwọ n'etiti etiti abụọ ahụ. Isi abụọ a nwere isi ihe, mana enwere ike ịnye ya isi ma ọ bụ ma nsọtụ abụọ na nhọrọ onye nrụpụta, A na-eme mkpịsị aka abụọ iji mee ebe a na-etinye otu n'ime eriri eri na oghere a na-etinye na hex nut nke ọzọ na-ejedebe ihe mkwado ihe elu nke etinyere eri ahụ
mkpụrụ osisi Flange bụ otu n'ime mkpụrụ osisi ndị a na-ahụkarị ma jiri ya na arịlịka, mkpọchi, kposara, studs, eriri na eriri ndị ọzọ nwere wiwi. Flange bụ nke pụtara na ha nwere ala ala ala.
Mkpọchi Mkpọchi Mkpụrụ niile nwere atụmatụ na -emepụta ọrụ "mkpọchi" na-adịgide adịgide. Mkpụrụ Mkpọchi Mkpọchi na-aga n'ihu na-adabere na nrụrụ na-agagharịrịrị ma ọ ga-abụrịrị iwe ma gbanyụọ; ha abụghị kemịkal na ọnọdụ okpomọkụ pere mpe dịka Naịlọn Fanye Mkpọchi Mkpụrụ mana ijigharị ejigharị.
Black Oxidation Hex mkpọchi, Nnukwu Ike Hex Bolts, Nwa mkpuchi Hex Mkpọchi, Mkpọchi, Hegzagon Socket Head mkpọchi, Din6921 Flange Mkpụrụ,
Adress: Southwest Industrial Mpaghara, Yongnian District, Handan obodo, Hebei Province
Na Nọvemba 1, 2020, Yanzhao fasten ...
Na Disemba 2, 2020, onye Egypt c ...
Ndị na-ere ahịa na mba ahụ niile gara Handan ...